लोकप्रिय लोकहरी | Yatra Khabar
Home अटोबजार लोकप्रिय लोकहरी
on: February 27, 2016 In: अटोबजार
खासमा उनको जन्म स्याङजाको बिर्घामा ५० बर्ष पहिले भएको हो । तर उनको कर्मथलो बन्यो बुटवल । वि. सं. २०४० तिर उनले औषधी व्यवसाय प्रारम्भ गरेका थिए । हेल्थ असिष्टेन्टको अध्ययन गरेकाले उनलाई यो व्यवसायले तानेको थियो । यद्यपि उनी अहिले पनि औषधी व्यवसायमा समेत संलग्न छन् । त्यसैले त उनी नेपाल औषधी व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । तर उनको यो भन्दा अर्को चिनारी पनि गौरव गर्न लायक छ । उनी हुन् लोकहरी श्रेष्ठ ।
लोकहरी श्रेष्ठले बुटवलमा लोक सुशिला अटो कन्सर्न संचालन गरिरहेका छन् । यस मार्फत उनी अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालिको डिलरका रुपमा महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीका विभिन्न मोडलका गाडी बिक्री गरिरहेका छन् । ०५२ सालमा उनले यो व्यवसाय प्रारम्भ गरेका थिए । यद्यपि त्यही समयमै उनी बस व्यवसायी पनि भैसकेका थिए । त्यतिखेर उनले विभिन्न रुटमा संचालित बस संचालनमा ल्याएका थिए । तर उनले पछि त्यो पेशा छोडेर औषधी व्यवसायी बनेका थिए ।
औषधि व्यवसायका क्रममा उनी त्यतिखेर गुल्मी, अर्घाखाची, रोल्पा, रुकुम आदि विभिन्न जिल्लामा पुग्थे । अहिले जस्तो सडक र सवारीको सुविधा त्यतिखेर हुने कुरै भएन । पछि महिन्द्राको जिप प्रयोग गरे । यसो गर्दा समय पनि बच्ने र सुविधा पनि हुने अनुभव भयो । वास्तबमा उनी महिन्द्राका जीपको सुविधाबाट प्रभावित भैसकेका थिए । त्यही समयमा अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालिले बुटवलमा डिलरका लागि प्रस्ताब राख्यो । उनी यो कार्य गर्न तयार भए । अनि शुरु भयो, अग्नि र महिन्द्रासँगको यात्रा ।
त्यतिखेर महिन्द्राको एनसी–६४० पिकअपको राम्रो बजार थियो । तर महिन्द्राका गाडी किन्नका लागि काठमाडौं वा वीरगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता थियो । अब बुटवलबासीका लागि त्यो बाध्यताको अन्त्य भयो । पहिलो बर्ष उनले ७ वटा मात्र पिकअप बिक्री गरे । त्यतिबेला युरो वान मोडलको जमाना थियो । महिन्द्राका गाडी यो भन्दा अपग्रेड भएका पनि थिएनन् । यसले गर्दा त्यो समयमा १० महिनासम्म बजारमा गाडी पुर्‍याउन नसकेर खाली बस्नु परेको थियो । ट्रयाक्स मोडल भए पनि उनले बिक्री गर्न पाएनन् । त्यसपछि महिन्द्रा पिकअप फस्ट र सेकेन्ड तथा कमान्डर जीपको जमाना आयो । डिआई इन्जिनमा धेरै मोडल आए । युरो टुको जमाना पनि आयो । यो अवस्थामा आएका बोलेरो, स्कोर्पियो, जाइलो आदि लोकप्रिय बने । त्यसपछि नै सवारी र म्याक्स पिकअप पनि आए । बुटवल र आसपासका क्षेत्रमा खासगरी सवारी र म्याक्स पिकअप निकै नै लोकप्रिय बने । ती पिकअप अहिले पनि संचालनमा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा आएका एक्सयुभी, क्वान्टो, जेनियो आदि सबै लोकप्रिय बने । समयक्रममा आएका विभिन्न मोडलका गाडी सबै स्थानमा लोकप्रिय बने । यसले लोकहरीको लोकप्रियतालाई पनि अझै उचाइमा पुर्‍यायो ।
अहिले लोक सुशिला अटो कन्सर्न मार्फत मात्र बर्षमा २ सय जति महिन्द्राका गाडी बिक्री हुने गरेको उनी बताउछन् । आवश्यक सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स सबै उपलब्ध गराएको र बिक्री पछिको सुविधामा पनि विशेष ध्यान दिएकाले नै यी गाडी लोकप्रिय हुने गरेको उनको अनुभव छ । अहिले लोक सुशिला अटो कन्सर्नले मात्र १६ जनालाई रोजगार उपलब्ध गराएको छ । २० बर्षको अवधिमा १५ सय जति गाडी बिक्री गरेको उनको अनुमान छ । उनले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, रोल्पा, प्युठान आदि गरी विभिन्न जिल्लामा समेत बर्षमा २ पटक चेकअप क्याम्पको आयोजना गर्छन् । कतिपय ग्राहकलाई महिन्द्राको भारतमा रहेको कम्पनीबाटै पनि गाडीको अवस्था वारेमा फोनबाटै सोधखोज गरेको पाइन्छ । यसलाई कस्टमर अवार्नेस प्रोग्राम अर्थात क्याप क्याम्प नाम दिइएको छ ।
यद्यपि कार सेग्मेन्टको छुट्टै बजार छ । बुटवलले धानेको पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, स्याङजा, पर्वत, बाग्लुङ, रोल्पा, रुकुम, दाङ, प्युठान आदि स्थानमा भने पिकअप र एसयुभी सेगमेन्टको राम्रो बजार छ । यी सेगमेन्टका गाडी भएकाले नै महिन्द्रा पनि लोकप्रिय बनेको छ । महिन्द्राका गाडी लोकप्रिय भएकैले बुक भएपछि मात्र यसको एलसी खोलिन्छ र ग्राहकलाई केही समयका लागि पर्खिन समेत भनिन्छ । यसले गर्दा पनि डिलर चलाउन झन् सहज भएको लोकहरीको अनुभव छ । कतिपयले लुम्बिनी भन्दा पनि बागमतिकै नम्बर प्लेट लगाउन रुचाउने भएकाले त्यसै अनुसारको व्यवस्था गरिने गरेको पनि उनको भनाई छ ।
पछिल्लो समयमा नयाँ प्रविधिका गाडी भित्रिरहेका छन् । मर्मत लगायतका बिक्री पछिको सेवाका लागि पनि दक्ष जनशक्तिको खाचो बढिरहेको छ । यी सबै कार्यका लागि काठमाडौं, वीरगञ्जदेखि भारतको लखनउ र मुम्बई सम्म पुगेर आफ्ना कर्मचारीले तालिम लिने र ग्राहकलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने गरेको उनी बताउछन् । भन्छन्, ‘पहिले दक्ष जनशक्ति पाउन गाहे थियो । त्यो अझै पनि कायम छ । यद्यपि हरेकलाई गाडी आवश्यक साधन बनेको छ । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा जनशक्ति भने बढिरहेका छन् । यसैकारण नै मेरो व्यवसायको क्षेत्र मात्र बढेको छैन । आवश्यक स्थान समेत बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।’ त्यसैले नै उनी अहिले सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्सका लागि आवश्यक स्थान फैलाइसकेका छन् ।
अटो शोमा ड्याटसनका ३ सय २५ गाडी बुकिङ
महिन्द्रा एसयूभीको नयाँ क्याम्पेन
निरन्तर यात्रामा निर्देश
५०० किलो सुनले बनेको विश्वको सबैभन्दा महँगो कार